Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu ka tago Barcelona – taasoo muujinaysa inuu noqonayo iibka ugu weyn ee xagaagan suuqa kala iibsiga ka dhici kara.
Ka dib bahdilaadii Champions League kooxda Bayern Munich ku riday Barcelona, waxaa durbadiiba shaqada laga caydhiyay tababare Quique Setien iyo qaar ka mid ah shaqaalihiisii hoose.
Waxaana ay haatan u muuqataa in Messi, oo 33 jir ah uu ka bixi doono garoonka Camp Nou ka dib guuldaradaas ceebta badnayd ee 8-2 lagu garaacay.
Wargeyska The Sun ayaa sheegay in Manchester City ay safka hore kaga jiri doonto iibka xiddigan reer Argentina iyadoo la rajeynayo inuu dib ula midoobo tababarihiisii ​​hore ee Pep Guardiola.
– Chelsea ayaa weli doonaysa inay lacag badan ku kharash garayso keenista kabtanka kooxda Brighton Lewis Dunk garoonka Stamford Bridge si uu u adkaado difaaca kooxda Blues oo itaal darnaa bilihii la soo dhaafay sida ay qortay Daily Star.
Ka dib markii ay la soo wareegeen labada weeraryahan ee Timo Werner iyo Hakim Ziyech, tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa raadinayaa inuu xoojiyo meelaha kale ee kooxdu ka jilcan tahay ka hor xilli ciyaareedka cusub ee 2020-21.
Waxaana loo maleynayaa inuu xiddiga Seagulls ee Dunk, oo 28 jir ah uu £40million ugu soo wareegayo Blues madaama uu yahay taageere Chelsea muddo waqti dheer ah.
– Hal nin ayaa u muuqda iaanu meelna u socon waana Pierre-Emerick Aubameyang weeraryahanka Arsenal kaasoo qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxeexo kooxda Gunners ee uu kabtanka u yahay.
Mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Gabon ayaa cirka isku shareeray in muddo ah ka dib markii qandaraaskiisa haatan uu gabagabo ku soo dhawaaday.
Laakiin Metro ayaa aaminsan in Aubameyang, oo 31 jir ah, uu ogolaaday inuu qalinka ku duugo heshiis seddex sano ah oo uu isbuucii ku qaadanayo £250,000, taasoo noqon doonta mid soo dhaweyn weyn u ah tababaraha Gunners Mikel Arteta.
– Football Italia ayaa soo warineysa in Leicester City ay kula tartamayso kooxda Faransiiska ka dhisan ee Paris Saint-Germain saxeexa 24 jirka daafaca midig ee Atalanta Timothy Castagne.
The Foxes ayaa loo maleynayaa inay xiiseynayaan xiddigan heerka caalami ee dalka Belgium iyagoo ku doonaya £18million, kaasoo 33 kulan u ciyaaray kooxda reer Talyaani ee aadka u duulaysay xilli ciyaareedkan.
– HITC ay soo warinaysa in kooxda Leeds United ay weli dalabyo kale u dirayso daafaca Brighton Ben White.
Macallin Marcelo Bielsa ayaa u muuqda inuu go’aansaday inuu White, 22, ku soo celiyo Elland Road ka dib hal sanno oo amaah ah oo uu Leeds kula joogay isagoo haddana ku laabtay kooxdiisii hore ee Brighton.
Laakiin waxay u muuqan doontaa in dalabka ugu dambeeya ee kooxda oo ah £30million laga soo diidi doono madaama kooxda Seagulls la rumeysan yahay inay ku iibinayso ugu yaraan £50million.
Sida laga soo xigtay Sky Sports, Fulham iyo Everton labaduba waxay muujinayaan xiiso weyn oo ay u qabaan daafaca bidix ee Wigan Antonee Robinson.
Xiddigan heerka caalami ee dalka Mareykanka, Robinson oo 23 jir ah ayaa u muuqda inuu u diyaar garoobayo Sheffield United ka dib markii ay dalab £2million ah aqbaleen isbuucii hore.
Previous PostWasiirka Waxbarashada Somaliland Oo Ka Waramay Heerka Waxbarashada Ee Somaliland Next PostWararkii Ugu dambeeyay ee Shirka Dhuusamareeb 3